C/raxmaan Cabdishakuur oo loogu baaqay inuu ka soo laabto inkirmaada axaadiith saxiix ah – Maanta Online
Asc walaalaha soomaaliyeed ee muslimkaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته salaan kadib.
Shalay waxaan isla wada qirnay in wslaalkeen siyaasi CC shakuur ku qaldamay inkirmaada iyo faalsa ku sheegidda axaadiithta saxiixada ah ayna waajib ku tahaý inow kasoo laabto allana u towbadkeeno.
Maanta waxaan rabaa inaan cadeeyo arima badan oo tacliiqaadkiinii badnaay ee shalay iigasoo baxay.
1– Arinta sida culuma badan uga hadleen waa arin diinta looga boxo haddii qofku uu aamino xalaaleestana lkn ma haboono in C/rahman la gaaleysiiyo waayoo taasu kuma imaan karto codkiisa kaliya wexey u baahantahay in lagala doodo lana hubiyo woxow ula jeeday sidaa darteed yaan lagula degdegin gaaleysiinta التكفير المعين.
waayoo gaaleysiinta muslimka oo la baneesto waa mida argagixisada nagu imtixaantay C/rahmaana waa siyaasi muslima oo weliba diinta yaqaan lkn kursi raadis iyo rag iska dhicin ayaa hog ku rideysa.
2– Xadiithkaas ناقصات عقل ودين … الحديث ma diidaayo haweenku xuquuqda ay ku leeyihiin mujtamaca iyo ixtiraamka’ haweenku diinta ugu sugnaaday wexey leeyihiin qaderin iyo tixgelin la mida tan raga wexeyna umada u qaban karaan xil kasta oo aan dhaaweceyn diintooda iyo asturkooda iyo howlohooda barbaarinta ilmaha iyo mas’uuliyadda guriga oo asal u ah kaalintooda ahna waxa ugu weyn oo tiirka u ah mujtamac caafimaad qaba oo dhaqan wanaagsan.
3– Waxey diintu raga ku gaaryeeshay hogaamada ugu sareeya dalka sida madaahibta islaamku isku raacday dhaqamada waxaana u daliila لا يفلح قوم ولو أمرهم امرهم امرأة
gaaladana umada muslimkaa uma aha tusaale dayasho mudan.
Inta xilkaas guud kasoo hartay iyo xilalka la mida sidii garsoorka iyo ciidamada melateriga ee furumaha dagaalka jooga IWM wixii kale wey ka shaqeyneysaa si waafaqsan aadaabta diintaقال تعالي؛ ولهن مثل الذي
عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة.
4– mowqifka AAShakuur ee siyaasigaa ee dowladda iyo culuma uu u arko iney taageeraan iyo arinkaan leeskuma xiri karo wax xiriirana kama dhexeeyo. walaalkeen dowladda waa mucaaradi karyaa waana geli karyaa taasu waa wax asaga u khaasa anaga waxa na khuseeya waa arinkaan diinta ku saabsan.
5– waxaa dadka qaar soo qoreen idinkuba aayado iyo axaadiith ayaad si qaloocan ugu taageertiin dowladdee maad siyaasiga ka leexataan?
Horto culumadu wey gefi karaan lkn qofkìi haaya hal eray oo laga leexiyay macnihiisii saxda ahaay halasoo bandhigo hadey khudba tahay ama muxaadaro umaddu ha aragtee waana qiraneynaa gefkeena waana ka towbad keeneynaa waaba hadii la helee weliba aad ayaan ugu farxi leheyn. Siyaasiyiinta laactameysa fadlan ilaaliya dhaqanka suuban una danqada diintiina iyo dalkiina.
← Xisbiga Himilo oo Xoghayihii Guud Ceyriyey iyo Jawaabta uu Ka Bixiyey
Mareykanka oo Soomaaliya ka cafinaya Lacagihii deyta ahaa →